မနေ့က အိမ်မှာကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာကုန်နေ၍ ဆပ်ပြာတစ်တုံးဝယ်လာခဲ့သည်။ ထုပ်ပိုးပုံက သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်
အကုန်လုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသည်။ အစက နိုင်ငံခြားက လာတာထင်ထားတာ သေချာဖတ်ကြည့်မှ Made in Myanmar ဆိုတာတွေ့ရတော့ နည်းနည်း ဂုဏ်ယူမိသွားသည်။ တို့နိုင်ငံလည်း မခေဘူးပေါ့။ ဒါမျိုးတွေ
နိုင်ငံတစ်ကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းထုတ်နိုင်နေပြီပဲ။ ကျွန်တော်က လည်းအကျင့်တစ်ခုရှိတာက ကုန်ပစ္စည်းကြေညာလေးများတွေ့ရင် သေသေချာချာ လိုက်ဖတ်တတ်သည်။ အဲဒီ ဆပ်ပြာရဲ့ကြော်ငြာလေး
ဖတ်ကြည့်ရင်းက ဘ၀င်မကျတာလေးတွေ့လာသည်။ xxx promotes good health and safe hygiene. Herbal contents prevent itchiness and skin inflammation.(ဘာဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေလဲမသိ)
Naturally formulated menthol generates coolness and freshness all day long. (ရေချိုးပြီး ငါးမိနစ်မကြာ ကားစောင့်ရင်း ချွေးတွေပျံလာသည်။) ဒီအထိကိစ္စမရှိသေး။ ကြော်ငြာပဲဆိုပြီးနားလည်ပေးလို့ရသည်။ ပြဿနာက xxx rejuveate skin moisture, smooths and softens skin. ဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာ ဖတ်ရင်းတန်းလန်း ရပ်နေမိသည်။ အသားအရည်ကို ပြန်လည်နုပျိုချောမွေ့ စေတယ်ဆိုပါလား။
ဒါဟာကြော်ငြာတစ်ခုမကတော့ပါ။ စားသုံးသူကို ၄င်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီမှ ကတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သွားပါသည်။ ၄င်းစာတန်းကို မြန်မာလိုရေးသည်ဆိုပါစို့။ မြန်မာစာဖတ်တတ်သူ တောလုံမေတစ်ယောက်က အသားအရည်ချောမွေ့လို၍ မျှော်လင့် ချက်တစ်ခုဖြင့်၎င်းဆပ်ပြာကို ၀ယ်သုံးပါပြီတဲ့။ ၄င်းမျှော်လင့်ချက်ပြည့်ပါမည်လား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီက xxx rejuveate skin moisture, smooths and softens skin. ဆိုသည့်စာကြောင်းကို မည်သည့် သုတေသန အထောက်အထားကိုအခြေခံ၍ ကြော်ငြာရသည်လဲ။ အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ပြီးမှရေးသည်လား။ ဒါမှမဟုတ်
လူအထင်ကြီးအောင်ပဲရေးသည်လားဆိုတာတော့ ကြော်ငြာရှင်မှသာ သိနိုင်ပေမည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က “ဒါကြော်ငြာလေ။ကြော်ငြာဆိုတာ ဒီလိုပဲ ရေးရပြောရတာပဲ” ဆိုလျှင်တော့
ကြော်ငြာဆိုတာ ကျော်အောင် ညာတာလားဟုသာပြန်မေးရပေတော့မည်။
မိမိကုန်ပစ္စည်းက အမှန်တကယ်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ကတိက၀တ်များကို ရေးသားဖော်ပြနေခြင်းသည်
စားသုံးသူကို လိမ်ညာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ False Advertising ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။ ၄င်းကဲ့သို့
"unfair and deceptive acts or practices in commerce" စားသုံးသူအတွက် မျှတမှုမရှိသော၊
လှည့်စားသောလုပ်ရပ်များကို တားမြစ် ထိန်းကွပ်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် Federal Trad Commission
ဟူသည့်အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ယူသည်။ FTC ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထဲက ကုန်ပစ္စည်းမှာရေးသားတဲ့စာ
Product Labeling နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Labels must be "truthful, accurate, and
substantiated" with evidence to back up any labeling claims. ကုန်ပစ္စည်းပေါ်မှာရေးသားသည့်အချက်အလက်များသည် "မှန်ကန်မှုရှိရမည်၊ တိကျရမည်၊
အထောက်အထားနှင့် မှတ်ကျောက်အတင်ခံနိုင်ရမည်" တဲ့။ ကဲ ဒီလိုဆိုရင်ကော ကျွန်တော်တို့ဆီက
ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာများ ဘောင်ဝင်နိုင်ကြပါမည်လား။ ဆပ်ပြာလို ကုန်ပစ္စည်းကကိစ္စမရှိ။
သူပြောသည့်အတိုင်းမဟုတ်လဲ စိတ်ပျက်ရုံကလွဲပြီး သိပ်နစ်နာမှုမရှိ။ စားသောက်ကုန်လို၊ ဆေးဝါးလိုအရာ
ကျတော့ အင်မတန်အရေးကြီးလာသည်။ ဆေးဗူးပေါ်မှာ ညွှန်ကြားချက်ကအစ၊ ပါဝင်သည့်ပစ္စည်း၊
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်တကွ ဓါတ်မတည့်သူများကိုပါ ဖော်ပြရမည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆေးတစ်မျိုးတည်း
ရှူလို့လည်းရ၊ သောက်လို့လည်းရ၊ လိမ်းလို့လည်းရသည့် ၉၆ ပါးပျောက်သည့် ဆေးကြေငြာတွေ
စာရေးသူအနေနှင့် ကြော်ငြာကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပါ။ ကြော်ငြာဆိုသည်မှာကုန်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းများအတွက်
သတင်းအချက်အလက်ပေးဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလောကတွင် မရှိမဖြစ်ပင်။ ထို့ကြောင့် ကြော်ငြာများကို
နှစ်ချိုက်စွာအားပေးပါသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ခါတစ်လေ စားသုံးသူကို စော်ကားသော၊ သေးသိမ်အောင်လုပ်သောကြော်ငြာသူတစ်ချို့တို့ကိုတော့စိတ်ပျက်မိသည်။ ကြော်ငြာစာသား ဆန်းရင်ပြီးရော၊ လူသိရင်ပြီးရော ရေးချင်ရာရေးထားသည်။ စကားလုံးများ၏ နောက်က ရိုက်ခတ်မှုကိုအလေးမထား။ ဒါမှမဟုတ် တမင်ပွဲဆူအောင်လုပ်ပြီး လူသိအောင်များဈေင်တာလဲဖြစ်မည်။ "ခေတ်မှီသူတိုင်း XXX ကုန်ပစ္စည်းကို သုံးကြတယ်" ဆိုသည့်စာသည် ၄င်းပစ္စည်းကို မသုံးသူများ အား ခေတ်မမှီဟု သွယ်ဝိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စားသုံးသူ၏ ရေးချယ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တာမွေအ၀ိုင်းရောက်တိုင်း "အပျော့ကြိုက်လျှင် ရေသောက်ပါ" ဟူသည့် စာတန်းကိုမြင်ရတိုင်း စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြင့် "အေး အပြင်းကြိုက်ရင်လည်း အရက်ပဲသောက်တော့မယ်" ဟုတုံ့ပြန်မိသည်။ (BCAP Code 3.14 Advertisements must not suggest that their claims are universally accepted ifasignificant division of informed or scientific opinion exists.)
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကြော်ငြာနှင့်ပတ်သက်သည့် လိုက်နာရမည့် ဥပဒေတွေရှိကြသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်
တစ်နိုင်ငံတော့ ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်တွေ တူကြမည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို
မည်သည့်ကြော်ငြာမဆို အခြေခံအားဖြင့် လူမှုရေးတာဝန်သိတတ်မှု (social responsibility) တော့ရှိရမည်။
သာမန် ယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်းတွေနှင့်စဉ်းစားလျင်ပင် ဘာကို ဘယ်လိုကြော်ငြာသင့်တယ်၊ မသင့်ဘူး
ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်များကို ပစ်မှတ်ထားကာကြော်ငြာခြင်းသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်
ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အညင်းအခုန်ဖြစ်နေရတုန်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆွီဒင်နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံတို့တွင် အသက် ၁၂
နှစ်အောက် ကလေးများကို ရည်ရွယ်၍ ကြေငြာခြင်းသည် ပြစ်မှုမြောက်သည်။ ဗြိတိန်၊ ဂရိ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဘယ်ဂျီယံ စသည့်နိုင်ငံများတွင်တင်းကျပ်သည့် စည်းမျည်းများနှင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အန္တရာယ် ရှိသည့်ပစ္စည်းများကို ကလေးသရုပ်ဆောင်များနှင့်မကြော်ငြာရ။ တစ်ခါတုန်းက ရန်ကင်းဘက်ရောက်တုန်း ဂက်စ်မီးဖိုကြော်ငြာမှာ ကလေးငယ်တစ်ယောက် မတ်တပ်ရပ်လျက်နှင့် ဗင်နိုင်းဆိုင်းဘုတ်ကြီးတစ်ခုကို ထိတ်လန့်စဖွယ်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ကလေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြော်ငြာတားမြစ်ချက်များထဲမှ တစ်ချို့ကို
Advertising shall not cause moral or physical detriment to minors, and shall therefore comply
with the following criteria for their protection:
ကြော်ငြာသည် ကလေးသူငယ်တို့၏ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရားထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမရှိရ။
a. it shall not directly exhort minors to buyaproduct oraservice by exploiting their
inexperience or credulity;
ကလေးငယ်တို့၏အတွေ့အကြုံနုနယ်မှု၊ ယုံစားလွယ်မှု ကိုအသုံးချလျက် ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှု
b. it shall not directly encourage minors to persuade their parents or others to purchase the
goods or services being advertised;
ကြော်ငြာပါကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုအောင် မိဘများအား ကလေးငယ်တို့မှ
ကလေးငယ်တို့၏ မိဘ၊ ဆရာသမားနှင့် အခြားသူများအပေါ်ယုံကြည်မှုအား အလွဲသုံးစားမပြုရ။
ဟူ၍ရှိရာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရှိ မည်သည့် ကြော်ငြာစာသားများသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီမညီ
အကဲဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သူများနိုင်ငံများတွင်တော့ စားသုံးသူအခွင့်အရေး ကာကွယ်သည့်အဖွဲ့များရှိသည်ဟုကြားဖူးသည်။ ကြော်ငြာမှာပြောသည့်အတိုင်း
အရည်အသွေးမပြည့်မီပါက တရားစွဲကာ စားသုံးသူ၏နစ်နာမှုကို တောင်းယူနိုင်ကြသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်
ကြော်ငြာရှင်တွေကလည်း အရမ်းမပြောရဲ မရေးရဲကြ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း
ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိလာလျှင် စားသုံးသူများအတွက် အခွင့်အရေးပိုရလာနိုင်ကောင်း၏။
အတိုက်အခံရှိလာလေ ကိုယ့်အခြေလှမ်းမမှားအောင် သတိထားရလေဆိုတော့
အရည်အသွေးများပိုကောင်းလာနိုင်ကောင်းပါရဲ့။ တာဝန်တွေ ပိုယူါရဲ့ ဟုသာ အတွေးဝင်္ကပါ
Posted by နည်ရဲဇော် at 2:34 AM
she, who is abroad